Adihevitra goavana no aterak’io resaka miralenta io, rehefa halalinina ho an’ny eto Madagasikara satria mifamatotra amina lafin-javatra maro, toy ny tantara, fomba amam-panao, kolontsaina,… Raha eo amin’ny resaka fitantanana ny firenena dia mbola vitsy an’isa ny vehivavy. Ho an’ny fanjakana foibe kosa dia manjakazaka tanteraka ny vehivavy, ary mampametra-panontaniana hoe : tena mohaka sy mety entin’ny vehivavy amin’ny sangany tokoa ve ny mpitondra ambony lehilahy eto fa toa tsy afa-manoatra ? Malaza ho mahery sy matanjaka ary tsy azo atao na inona na inona eto amin’ny tany sy ny fanjakana ny vadin’ny filoha. Izy mihitsy ankehitriny no toa mitondra ny baolina, ary io mihetsiketsika fatratra io. Nalaza ireny ny kolikoly avo lenta lenta nataona vehivavy tandapa iray. Nisy ny fahatrarana volabe 30 000 000 Euros nentina Malagasy tany ampitan-dranomasina, dia mbola vehivavy akaiky ny filoha ihany. Mandeha ny ampamoaka mombana kolikoly 70 000 Euros, dia vehivavy no voatonona. Tena mafy sy mahery ny vehivavy manodidina ny filoha ary tsy azo kitikitihina mihitsy. Fanta-daza sy tena kinga amina afera ny sasany, ka raha izany fahaiza-manao izany angamba no ampiharina amin’ny fampandrosoana mety handroso ihany isika. Mba rahoviana re ireny no mba ho lasa tena fitaratra amin’ny zavatra tsara sy mendrika fa tsy dia amin’ny resaka afera maloto tahaka izao hatrany e ?